Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Namoy mpitarika mpitety faritany 2 tany COVID-19 i India
Enga anie 8, 2021
LR - Anil Bhandari sy Rajendra Kumar, mpitarika ny dia any India
Ny coronavirus COVID-19 atahorana dia manohy manimba hatrany ny fiainana any India ary anisan'ireo voadona amin'izany ny mpiasan'ny indostrian'ny mpitsangatsangana sy ny mpitarika.
Anil Bhandari sy Rajendera Kumar avy amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany any India no very androany resin'ny COVID-19.
Na i Bhandari na i Kumar dia samy te hampandroso ny fanabeazana mandray vahiny.
Nihoatra ny 21 tapitrisa ny isan'ny virus coronavirus any India satria tranga COVID-412,262 miisa 19 XNUMX no voasoratra manerana ny firenena.
Ireo traboina farany namoy ny ainy androany noho ny valanaretina dia mpilalao manan-danja roa amin'ny indostrian'ny fizahan-tany.
Anil Bhandari, izay nitantana ny AB Smart Concepts, dia resy tamin'ny COVID-19, ary maty io maraina io taorian'ny fijanonan'ny hopitaly fohy. Bhandari dia nitantana ny India Tourism Development Corporation nandritra ny taona niforonany ary taty aoriana dia niaraka tamin'ny Travel House ihany koa.
Bhandari dia nanao asa be dia be mba hanomezana fankasitrahana ny vondron'olona mpahandro ary koa nanome antoka fa nomena ny tokony ho izy ireo mahatratra ny tontolon'ny lakozia.
Ilay veterana mandray vahiny izay nodimandry androany dia i Rajendera Kumar, talen'ny hotely masoivoho ao New Delhi. Izy dia zanaky ny angano Ram Pershad, izay nitarika ny federasiona hotely nandritra ny taona maro.